धर्म Archives - E mechi
आमा खुवाउने औँसीको दिन यी काम गर्नुहोस्, हुनेछ तपाईले नसोचेको लाभ !
काठमाडौँ । यो वर्षको आमा खुवाउने औँसी बैशाख २१ गते परेको छ । आमालाई विभिन्न प्रकारले पुज्ने चलन रहेको छ । धार्मिक मान्यताअनुसार त्रेता युगको सुरुवात बैशाख महिनाबाअट नै सुरु भएको कारण बैशाख महिनामा पर्ने औँसीको दिनलाई विशेष मान्ने परम्परा रहेको छ । यो दिनलाई पितृ दोष या कालसर्प भएकाले पनि विधिवत रुपमा पुवा अर्चना गर्न सके विशेष लाभ हुने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । मातातिर्थ औसीको दिन पितृ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि सफा शुद्ध भई उपवास बसे पितृलाई खुसी पार्न सकिने र जीवनमा हरेक कामहरु सफल हुने बताइएको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई आमा खुवाउने औसीको दिन गनैपर्ने केही कामको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । १.आमा खुवाउने औसीको दिन पवित्र नदि, जलासय वा कुण्डमा गइ स्नान गरेर शुद्ध पानीमा कालो तिल हालेर पितृलाई तर्पण गर्नाले विशेष लाभ हुनेछ । २. यस दिन गरिब दुखीलाई भोजन गराउने द
मनोकामना पूरा हुने ‘त्रिपुरा सुन्दरी’…
डडेल्धुरा : त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–८ मा पर्दछ। यो त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको मन्दिर सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक प्रसिद्ध मन्दिर हो। यस मन्दिरलाई सुदूरपश्चिमकी ९ देवीहरूमा एक देवीको मन्दिर मानिन्छ। त्रि पुरा सुन्दरी भगवतीको मन्दिर बैतडी जिल्ला सदरमुकामबाट नजिकै रहेको छ। उक्त मन्दिरलाई माता भगवतीको स्वरूप मानेर पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। उक्त भगवतीको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने, दुष्टको मानमर्दन हुने र भक्तजनको कल्याण हुने विश्वास गरिन्छ। शक्तिशाली भगवतीलाई असार महिनामा अषढी जात, साउन अथवा भदौमा रक्षावन्धनका दिन वोगाल जात, कात्तिक शुक्ल नवमीका दिन कात्तिक जात मनाइन्छ।असोज र चैत्रको नवरात्रिमा परेवादेखि दशमीसम्म नियमित पूजा हुन्छ। कात्तिकको जातका अवसरमा राँगा र बोकाको बली दिने चलन रही आएको छ। यहाँ लाग्ने त्रिपुरा सुन्दरी मेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाक
मुस्लिम राष्ट्र अबुधाबिमा पहिलोपटक हिन्दु मन्दिर निर्माण हुँदै, क्राउन प्रिन्सले दान गरे जग्गा
एजेन्सी। मुस्लिम राष्ट्र यूएईको अबुधाबीमा पहिलो पटक हिन्दु मन्दिरको निर्माण हुने भएको छ । बोचासंवासी श्री अक्षर-पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) ले निर्माण गर्न लागिरहेको उक्त मन्दिरको शिलान्यास समेत गरिएको छ । शिलान्यास कार्यक्रममा उक्त भारतीय संस्थाका अध्यक्ष आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराजले मन्दिरको शिलान्यास गरेका हुन् । मन्दिरको शिलान्यास कार्यक्रममा यूएईका सरकारी अधिकारी तथा मन्त्रीहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो । सो मन्दिर निर्माणको अनुमती सन् २०१५ मा नै दिईएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यूएईको भ्रमण गएको समय सो मन्दिर निर्माणको लागि अनुमती सरकारले दिईएको थियो । उक्त मन्दिर निर्माणका लागि अबुधाबीका प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयनले ठुलो क्षेत्रफलको जमिन दान दिएका हुन् । ५५ हजार बर्ग मिटरमा निर्माण हुन लागिरहेको उक्त मन्दिर निर्माण
Apr192019 by News Desk SectionNo Comments
द्रोपतीले पाँचवटा श्रीमानसँग विवाह गरेको कुरा त तपाईले महाभारतमा पढ्नु नै भएको होला । अव तर पाँच श्रीमान भएकी उनले कसरी सुहागरात मनाईन भन्ने कुरा अझ रोचक रहेको छ । दुर्योधनले पाँचै भाई पाण्डबहरुलाई मार्ने खवर फैलिएपछि, डराएका पाण्डबहरु आमा कुन्ति सहित ब्राम्हण जीवन ब्यतित गर्न थालेका थिए । यसरी पाण्डवहरु हरेक दिन भिक्षामा आएको सामा आमालाई सुम्पिएर मात्रै उपभोग गर्ने गर्दथे । राजा द्रुपदको दरबारमा त्यसबेला द्रोपदीको स्वयम्बरको समय चलिरहेको थियो जहाँ बिभिन्न देशका राजकुमारहरु उपस्थित थिए । राजाले स्वयम्वरमा एउठा सर्त राखेका थिए । जसले तलाउमा हेरेर रुखमाथी झुण्ड्याईको माछाको आँखाको नानीमा तीरले साँध्न सक्छ, उसैसित द्रोपदीको बिवाह हुने तय थियो । अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग आज्ञा लिएर धनुषमा बाण चढाए र तलाउतर्फ निहुरीएर चलाएको तीर माछाको आँखा बिचबाटै बाहीरीयो । राजाको पूर्व सर्त अनुसार द्रोप
जुन घरमा भगवान हनुमानजीको मंत्र जप हुन्छ, त्यस घरमा कुनै प्रकारको समस्या आउँदैन
जुन घरमा भगवान हनुमानजीको मंत्र जप हुन्छ, त्यस घरमा कुनै प्रकारको समस्या आउँदैन । हनुमानजीका प्रसिद्ध मंत्र छन् जुन घरमा ति मंत्रको साधना गर्दा सबै प्रकारको दुःख नास हुन्छन् । हनुमानजी यस्तो देवता हुन् कि उहाँ छिट्टै प्रसन्न हुुनुहुन्छ । जो भक्तले सेवा भावले हनुमानजीको सेवा गर्दछन्, उनलाई हनुमानजीको दयारूपी शितलता निश्चित सम्भव हुन्छ । हनुमानजीलाई प्रसन्न गर्न ज्यादै सरल उपाय छन् । जीवनमा केही समस्या परेमा हनुमानको नाम लिनेवित्तीकै विध्न वाधा हटेर जान्छ । उहाँलाई प्रसन्न पारेर सबै सिद्धि, शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । सौ उहाँकै कृपाबाट अष्ट सिद्धि, नव निधि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हनुमानको साधाना गर्नुभन्दा पहिले केही नियमप्रति ध्यान दिनु जरूरी छ । १. पूजा गर्दा ब्रह्मचर्य पालन गर्नु जरूरी छ । २. निश्छल सेवा भावना राख्नुपर्छ, क्रोध र अहंकारबाट टाढा रहनुपर्छ । ३. हनुमानलाई ध्यु हालेर बना
ग्रहचक्रमा चन्द्रमाको व्यापक उथलपूथल ! कुन राशिलाई कस्तो असर ?
अप्रिल २१ को दिउँसो देखि २३ साँझ सम्म नीच राशिमा र अप्रिल २३ देखि अप्रिल २६ बिहान ३:३० सम्म मीन राशिमा चन्द्रको भ्रमण रहनेछ । चन्द्र नीच राशिमा प्रवेश गर्दा मानसिक शान्ति हुने र धनु राशिमा प्रवेश गर्दा जीवन साथीका बिचमा झगडा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। २५ अप्रिलको बिहान १०:१५ बजेदेखि २६ अप्रिल बिहान ३:३० मिनेट सम्म यसको प्रभाव अत्यधिक रहेनछ । यस्तै यस अवस्थामा अनावश्यक दुर्घटना हुने तथा अन्य विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छ। यस समयमा राजनैतिक अराजकता देखिन सक्छ । ग्रहचक्रमा चन्दको कारण आइपर्ने उथलपुथलको कारण कुन राशिलाई कस्तो असर ? मेष जीवन साथीसंगको सम्बन्धमा तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहने छ भने खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। वृष दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहनेछ। मिथुन मिथुन राशी हुनेहरु २५ तारिखको दिन बिशेष सावधानी अपन
यो पनि पढ्नुहोस: तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा रगत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। भारतका प्रख्यात उत्प्रेरक विवेक बिन्द्राले २०७५ माघ ४ मा सबैभन्दा अस्थिर सरकारको नाम राखेर एउटा भिडियो युट्युबमा राखे। उक्त भिडियो रातारात भाइरल भयो। धेरै नेपालीलाई उक्त भिडियोमा भएका धेरै कुरा सत्य छैनन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन रातारात फैलियो? यसको कारण, उक्त भिडियोको आकर्षक फोटो चित्र हो, जसमा लेखिएको थियो- ‘नेपालमा १७ वर्षमा १७ प्रधानमन्त्री बदलिए।’ उनलाई धेरै नेपालीले धन्यवाद पनि दिए। मलाई भने एउटा प्रश्नले घोच्न थाल्यो- के नेपाल बन्दै बन्दैन त? हामी नेपालीले दुनियाँका सबैभन्दा पछिल्लो विकासको लहर देखेका मात्र छैनौं, आफ्नै रगत र पसिनाले बनाएका पनि छौं। कतारका रंग
हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझैपनि जिवितै छ । विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् । त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिन्छ । जुन यसप्रकार छन् : १. दीपावलीको दिन यदी कोही सुन्दरी साज–सज्जाका साथ देखिइन् भने तपाईंलाई पनि धन प्राप्त हुने संकेत हुन सक्छ । २. यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ । ३. विहिबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संक
यो संसारमा थुप्रै बिषयहरु बिवादले भरीएका छन,त्यी बिवादहरु मध्य यो पनी एउटा विवाद हो की के यो संसारमा भगवान छन? धेरैले मान्ने गर्दछन की भगवान छन तर कतीपयले भने भगवानमा बिशवास राख्दैन्न। मानीश द्वारा बनाईएका सबै धर्म अनी समाजमा भगवान भएको मानीन्छ। जस्लो यो पृथ्वी,जिब जन्तु,आकास,समुन्द्र लगायत सबै सजीब तथा निर्जीब प्राणीहरुको रचना गर्यो हामीलाई लाग्छ त्यही भगवान हो । तर कुनै पनी धर्ममा भगवानको प्रतक्क्ष अस्तीत्व भयको प्रमाण भेटीदैन। तर फेरी पनी हामी भगवानलाई मान्छौ कीनकी हामी बच्चा देखीनै यहीं देख्दै अनी सिक्दै हुर्केका हौं।।त्यसैले हाम्रो यो सोच बसीसकेको छ की भगवान साँच्चीकै छन। हिन्दुहरुका लागी ब्रह्मा,बिस्नु,महेश अनी मुसलवानहरुका लागी अल्हा र क्रिच्शियनहरुका लागी गडको रुपमा भगवान मानीन्छ। हामी मानीसहरुले नै आआफुले भगवानको रंग,रुप र प्रकार दिएका हौं, दुई मीनेट चीसो दिमागले सोच्न
यी तीन राशि हुनेहरुले सुन लगाउनै हुँदैन ! जीवनमा मिल्न सक्छ दुख मात्रै, आर्थिक रुपमा पनि हुन सक्छ नोक्सान
सुनको महत्व विशेषगरी धार्मिक तथा शृंगारको लागि बढी प्रयोग हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरुको प्रभावका कारण हामीमाथि प्रत्येक धातुले आफ्नै किसिमको प्रभाव पार्छ । ज्योतिषीहरुले सुन लगाएर ग्रालाई कसरी प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएका छन् । यदी तपाई आफ्नो जीवन सजाउन चाहनुुहन्छ भन्ने सुन लगाउने र राख्ने सही विधि जानीराख्नुस: ज्योतिषशास्त्रअनुसार बायाँ हातमा सुन लगाउनु उचित होइन । बाँया हातमा सुन लगाउदा दुर्भाग्य निम्त्याउने विश्वास गरिन्छ । साथै सुन हराउनु वा भेट्टाउनु अशुभ मानिन्छ । सुन हराउँदा स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ र भेटिएको सुन घरमा राख्दा खर्च बढ्ने मान्यता छ । यदी तपाई दाम्पत्य जीवन खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ घाँटीमा सुनको सिक्रि र चोर औंलामा सुनको औंठी लगाउनुहोस् । ज्योतिषशास्त्रअनुसार यसलाई शुभ मानिन्छ । तर गर्भवती र वृद्धा महिलाले सुनका गरगहना